Yayisetyenziselwa ukuba yinto elula kangaka, akunjalo? Xa kufikelelwe ekukhuthazeni isikolo sakho sabucala, uya kudala incwadana enobungakanani, uyithumelele kwiintsapho ezinokuthi, kwaye ulinde ifowuni ukuba ibhale kunye nokufakwa kwamanyathelo okuqeshwa. Kodwa akayi kuphinda. Namhlanje, izikolo zifumana ezi zikhundla zokufuna ukuzithengisa ngokwabo kubathengi abanomdla. Ezi ziintsapho ziza kuba neelulu elide lezinto abafunayo esikolweni kubantwana babo, bafuna ukufumana imfundo enkulu ngexabiso elibiza, kwaye bafuna okulungileyo.
Izikolo zijongene nemakethe yokukhuphisana, kodwa ezininzi zazo ziyaqhawuka xa kuziwa ekuthengiseni. Ngoko, isikolo sakho siyaqaphela njani kwaye ufuna ukuba ugxininise njani imizamo yakho yokuthengisa?
Nazi izinto ezintathu onokuqalisa ukuzenza namhlanje ukunyusa imizamo yakho yokuthengisa. Omnye wabo uya kusindisa imali!
1. Hlaziya kwaye ulungiselele iwebhusayithi yakho
Namhlanje, akuqhelekanga kwizikolo ezizimeleyo ukuba zifumane "izicelo ze-phantom" zithetha ukuba akukho irekhodi yentsapho kwinkqubo yabo ngaphambi kokuba isicelo sitholwe okanye isicelo sodliwano - ndlebe senziwe. Kwiminyaka edlulileyo, indlela yodwa yokufumana ulwazi malunga nesikolo kukubuza. Ngoku, iintsapho ziya kufumana olo lwazi ngokukhangela okukhawulezayo kwi-intanethi. Ngoko ke, kubalulekile ukuba iwebhusayithi yakho isebenze injongo enhle.
Qiniseka ukuba igama lakho, indawo, amabakala asebenzayo, kunye nemiyalelo yesicelo ihamba phambili kunye neziko lakho kwiwebhusayithi, kunye neenkcukacha zakho zoqhagamshelwano.
Musa ukwenza abantu balawule ukufumana olu lwazi olubalulekileyo abayifunayo; unokulahlekelwa yintsapho ngaphambi kokuba ufumane ithuba lokuvuma. Qinisekisa ukuba inkqubo yesicelo ichazwe ngokukhawuleza ukufumana imihla kunye nemihla yokukhawuleza, kunye neziganeko zomphakathi ezithunyelwe ukuze iintsapho zikwazi xa ubamba indlu evulekileyo.
I-site yakho kufuneka iphinde iphendule, nto leyo ithetha ukuzilungisa ngokuzenzekelayo ngokusekelwe kwisixhobo esisetyenziswa ngumsebenzisi okwangoku. Namhlanje, iintsapho zakho eziza kuba ziza kusetyenziswa iifowuni zazo ukufikelela kwiziko lakho ngethuba elithile, kwaye ukuba indawo yakho ayihambisani nokuhamba, amava omsebenzisi akayi kuba yinto enhle. Ngaba awuqinisekanga ukuba indawo yakho iyayiphendula? Khangela esi sixhobo esiluncedo.
Kufuneka kwakhona ucinge ngendlela isayithi lakho kwisikolo lijongwa ngayo ngeenjini zokukhangela. Oku kubizwa ngokuba yi-Search Engine Optimization, okanye i-SEO. Ukuphuhlisa isicwangciso esiqilileyo se-SEO kunye nokujoliswa kwamagama athile angundoqo kunokunceda isayithi lakho lithathwe yiijini zokukhangela kwaye zibonise ngokufanelekileyo phezulu kwoluhlu lokukhangela. Kwimiqathango ephambili, i-SEO ingadilizwa njengale: Iinjongo zophando ezifana ne-Google zifuna ukubonisa amaphepha abasebenzisi abanomdla onomdla kwaye ohloniphekileyo kwiziphumo zabo zophando. Oko kuthetha ukuba kufuneka uqinisekise ukuba iwebhusayithi yakho yesikolo inomxholo othakazelisayo kwaye ohloniphekileyo ongaboniswa kwiziphumo zophando.
Ubhala umxholo omkhulu osebenzisa amagama angundoqo kunye nemigca yamagama amakhulu (iibinzana, ngokwenene) ezifunwa ngabantu kwi-intanethi. Intle kakhulu! Ngoku, qalisa ukudibanisa nomxholo wangaphambili kumxholo wakho omtsha.
Ngaba ubhale iblogi malunga nenkqubo yokungena iveki evelayo? Le veki, xa ubhala ngebhanki malunga nenkxaso yezemali njengenxalenye yenkqubo yokwamkelwa, qhagamshela kwinqaku lakho langaphambili. Oku kudibanisa kuya kunceda abantu bahambe nge-site yakho kwaye bafumane umxholo omkhulu kakhulu.
Kodwa, abaphulaphuli bakho baya kufumana njani umxholo wakho? Qala ngokuqinisekisa ukuba wabelana nomxholo wakho usebenzisa izinto ezinjengeendawo zokuzonwabisa ezentlalo (i-Facebook, i-Twitter, njl. Njl) kunye nokuthengisa nge-imeyile. Kwaye, phinda. Ibhulogi, unxibelelwano, wabelane, phinda. Ngokufanayo. Ngokuhamba kwexesha, uya kubakha abalandeli bakho, kwaye ii-injini zokukhangela ezifana ne-Google ziya kuqaphela, ngokunyusa ukwanda kwegama lakho.
2. Ukuphuhlisa iplani yolondolozo lwezoqoqosho loluntu.
Akwanele ukuba ube newebhusayithi enomxholo omkhulu. Njengoko ndandisanda kukhankanya, kufuneka uxelele umxholo wakho, kwaye isicwangciso soqhagamshelwano esinamandla sendlela yindlela efanelekileyo yokwenza oko.
Kufuneka ucinge malunga nabaphulaphuli bakho ekuhlaleni kunye nendlela oya kusebenzisana ngayo nabo. Ukuba awukho esebenzayo kwimidiya yoluntu, kufuneka ube. Cinga ngezenzo zakho kwimihla ngemihla. Ndiqiniseke ukuba mhlawumbi uhlolisisa ubuncinane enye indawo yesigidimi soononophelo ngosuku, kwaye unokucinga ukuba abaphulaphuli bakho bathetha okufanayo. Cinga ngento enokuthi ibe yinto efanelekileyo yesikolo sakho, kwaye ukhethe enye indawo okanye izithuba zombini zokuzonwabisa ukuze usebenzise ukuqala, ukuba awukho. Ngaba unomdla ngakumbi ekujoliseni abazali okanye abafundi? Ukuqwalasela abaphulaphuli abajoliswe kuzo kubalulekileyo. I-Facebook ne-Twitter ingaba yinto efanelekileyo yokujolisa abazali, ngoxa i-Instagram ne-Snapchat ibingcono kakhulu kubafundi.
Kufuneka ixesha elingakanani ukuba unikezele kwisicwangciso seendaba zoluntu? Ukubambisana kukubalulekileyo xa kuthengiswa ukuthengiswa kweendaba zentlalo, kunye nokuqulathe umxholo rhoqo kunye nenjongo yento obelana ngayo kubalulekile. Qinisekisa ukuba unesicwangciso esilungileyo kwixesha elide, kwaye uthumela rhoqo. Eyona nto, ufuna ukugxila kwinqulatho yesigqabi, esingekho ixesha elixhomekeke kuyo kwaye inomdla wokuhlala ixesha elide. Ngaloo ndlela, unokwabelana ngokuqulathwe ngamaxesha amaninzi, kwaye ihlala ifanelekileyo. Izinto ezifana nezikhumbuzo zekhalenda azisoloko ziluhlaza, kwaye zingasetyenziselwa kuphela ixesha elifutshane.
3. Misa-okanye ubuncinci umda-shicilela ukupapashwa
Ukuba ukufunda le nto kukubangela ukwesaba, ndiphulaphule. Ukupapashwa kweepapasho kuyabiza, kwaye ayisoloko isebenzise kakhulu imali yakho. Kunzima ukugweba ngokwenene impumelelo yokupapashwa, kodwa izikolo ezininzi ziye zayeka uninzi lwezipapasho zabo zokupapasha, kwaye ziqikelele ntoni na?
Benza ngcono kunanini! Nantsi isizathu: ezininzi zezi zikolo ziye zatshintshela imali leyo kwizicwangciso zokuthengisa ezithengisayo, ezibanceda ukuba bafikelele kubaphulaphuli abajoliswe kuyo ekuhlaleni.
Ukuba ucinga kuwe, akukho ndlela yam intloko / ibhodi yamatrasti aya kuhamba ngayo oku, nantsi into eyenzekayo nam. Ilungu lebhodi kwelinye lam izikolo zam zangaphambili, beza kum ngokucacileyo ukuba asizange sibandakanywe kwincwadana enkulu yokubhengezwa kwinqwadana yentengiso esikolweni kangangokuba ininzi yezikolo zethu zontanga zilapho. "Abantu abane beza kumbuza ukuba kutheni apho! " Ndaphendula nje, "uyamkeleka." Cinga ngento-ukuba umntu ukhangele iphephandaba kwaye uqaphele ukuba awukho, ngaba yinto embi? Hayi! Ugcine imali ngaphandle kokukhangisa, kwaye umfundi ucinga ngewe. Iyintoni injongo yokuthengisa? Ukuze uqaphele. Ukuba ufumanisa ukuba ungabhengezi, ziindaba ezilungileyo. Kwaye, abantu banokuzibuza ukuba kutheni ungabikho kwiphepha okanye kumaphephancwadi abawafundayo, oko kuthetha ukuba banokuthi baqhubele phambili kwiwebhusayithi yakho okanye iphepha le-Facebook ukuze ubone ukuba kwenzekani esikolweni sakho. Ingabonakali kwimiba ethi "Ukubuyela esikolweni" inokukwenza abantu bacinge ukuba akudingeki ukuba ube neentengiso, nto leyo eyenza bacinge ukuba wenza kakuhle, ukuba izicelo zikhukhulayo. Unikezo nemfuno. Ukuba abantu bayayiqonda imveliso yakho (isikolo sakho) njengemveliso efunwa kakhulu, ngoko baya kuyifuna.
Ngethuba nje uneminye imizamo yokufikelela, kungekhona kumacandelo okupapasha okuprinta akuyi kukulimaza.
Kwaye inzuzo yokuthengiswa kwegedijithali yinguqulelo ngokukhawuleza. Xa unokwenza isikhangiso sedijithali esikhokelela umsebenzisi ngokufanelekileyo kwifomu yophando apho ufumana ulwazi lwabo loqhagamshelwano, olufanelekileyo ukusebenzisana. Ukupapashwa kweprinta kufuna ukuba umfundi ahambe kwifom yejelo leendaba - umshicilelo wokushicilela - kwenye ifomu yeendaba - ikhompyutheni okanye idivayisi yayo yeselula - kwaye ikufune. Xa ukhangisa kwi-Facebook kwaye ubonise ngokufanelekileyo kumgca wexesha, oko kukucofa kuphela ukuba usebenze nawe. Kulula kumsebenzisi, kwaye ikusindisa ixesha kunye nemali! Imibuzo engakumbi ngemali engaphantsi? Ndi tyikitye!
Ukuthengisa kwiZikolo: 5 Izixhobo ozifunayo ngoku
Ininzi ngokuqhelekileyo Funda iincwadi kuMgangatho oPhakamileyo
Iinqwelo ezi-5 eziPhambili zeMfazwe Yehlabathi II
Kutheni naKanjani kwaye Uyakwenza njani Ukunyuka